10 Mar 2017 . 6:21 PM
ကဲ . . လက်ရှိအလုပ်မှာ ပျော်ကြရဲ့လား။ Edenred-Ipsos Barometer အဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတကာဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၄၄ဝဝ ကို စစ်တမ်းကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ ၇၁ရာခိုင်နှုန်းက လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်လို့ ဖြေကြပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက်ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အလုပ်သမားတွေအပျော်ဆုံးနိုင်ငံက ဘယ်နိုင်ငံဖြစ်မလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
၅။ ဘရာဇီး (Brazil)
ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလုပ်ခလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၈ (၃၁၁,ဝဝဝကျပ်) သာရှိပေမယ့်လည်း ဝန်ထမ်း ၇၇ရာခိုင်နှုန်းကတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဆိုရင် တစ်နှစ်မှာ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် ၁၅ရက်ရှိပြီး ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ ခွင့်ရက်တွေအပြင် ပညာသင်ဆုတွေပါ အပြည့်အဝခံစားစေတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။
၄။ ချီလီ (Chile)
ချီလီနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလုပ်ခလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇၁ (၅ဝ၇,ဝဝဝကျပ်)သာ ရှိပေမယ့်လည်း ဝန်ထမ်း ၇၇ရာခိုင်နှုန်းက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျေနပ်နေကြပါတယ်။ ဘရာဇီးနိုင်ငံနဲ့ရာခိုင်နှုန်းခြင်း တူပေမယ့်လည်း ချီလီနိုင်ငံက အခြေခံလစာပိုများတဲ့အတွက် နံပါတ်စဉ်အရ ပိုမြင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်မှာ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် ၁၆ရက်ရှိတဲ့အပြင် မီးဖွားခွင့် ၁၈ပတ် (၄လခွဲ) အထိတောင် လစာနဲ့ခွင့်ယူလို့ရပါတယ်။
၃။ အမေရိကန် (USA)
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ တစ်နာရီလုပ်ခဟာ ၇.၂၅ ဒေါ်လာ (၉,၉ဝဝကျပ်) အထိရှိရုံမက ဝန်ထမ်း ၇၇ရာခိုင်နှုန်းက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျေနပ်နေကြပါတယ်။ အပေါ်ကနိုင်ငံတွေနဲ့ ရာခိုင်နှုန်းခြင်းတူပေမယ့်လည်း လစာများလွန်းတဲ့အတွက် နံပါတ် (၃) ချိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် ၁ဝရက်ရှိပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားတာတွေရယ်၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး အပြည့်အဝရရှိတာတွေကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ချင်သူများပြားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ မက္ကဆီကို (Mexico)
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့ တစ်နာရီလုပ်ခဟာ ၃.၉ ဒေါ်လာ (၅,၃ဝဝကျပ်) ဖြစ်လို့ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် အခြေခံလုပ်အားခ အနည်းငယ်နည်းပါးတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်သလို အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်လည်း ၁ဝရက်သာ ရှိပါတယ်။ Edenred-Ipsos Barometer အဖွဲ့ဟာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ ဝန်ထမ်းတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာ ၈၁ရာခိုင်နှုန်းဟာ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ကို ကျေနပ်ကြပါလို့သိရပါတယ်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ တစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ဖို့ လစာနဲ့ ခရီးခြောက်ရက် ထွက်ခွင့်ပြုပါသေးတယ်။
၁။ အိန္ဒိယ (India)
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၉ (၃၆၇,ဝဝဝကျပ်) ဖြစ်လို့ နိုင်ငံတကာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် နည်းတယ်လို့ ယူဆရပေမယ့် အိန္ဒိယဝန်ထမ်း ၈၈ရာခိုင်နှုန်းဟာ လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာ ကျေနပ်လို့နေပါတယ်။ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် ၁၇ရက်ရှိပြီး လုပ်သက်ခွင့်ရက် (Annual Leave) ၂၁ရက်ထိတောင်ရတဲ့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အန္တရာယ်ဖြစ်လာရင်လည်း ဒေါ်လာ၁သိန်းအထိတောင် လျော်ကြေးရပါသေးတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေအပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်သလို စိတ်အညစ်ဆုံး၊ ဖိအားအများဆုံးနိုင်ငံကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း အခြေခံလုပ်အားခ ၃၆ဝဝကျပ်မှ တိုးမြှင့်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ကဲ . . . စာဖတ်သူတွေလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရဲ့လား၊ ရင်ဖွင့်ရအောင်ဗျာ။။
ကဲ . . လကျရှိအလုပျမှာ ပြျောကွရဲ့လား။ Edenred-Ipsos Barometer အဖှဲ့ဟာ နိုငျငံတကာဝနျထမျးပေါငျး ၁၄၄ဝဝ ကို စဈတမျးကောကျယူလိုကျတဲ့အခါမှာ ၇၁ရာခိုငျနှုနျးက လကျရှိလုပျငနျးခှငျမှာ ပြျောရှငျကွပါတယျလို့ ဖွကွေပါတယျ။ နိုငျငံအလိုကျခှဲခွားလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ အလုပျသမားတှအေပြျောဆုံးနိုငျငံက ဘယျနိုငျငံဖွဈမလဲဆိုတာ လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
ဘရာဇီးနိုငျငံရဲ့အခွခေံလုပျခလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၈ (၃၁၁,ဝဝဝကပျြ) သာရှိပမေယျ့လညျး ဝနျထမျး ၇၇ရာခိုငျနှုနျးကတော့ လုပျငနျးခှငျမှာ ပြျောရှငျကွပါတယျ။ ဘရာဇီးနိုငျငံမှာဆိုရငျ တဈနှဈမှာ အမြားပွညျသူရုံးပိတျရကျ ၁၅ရကျရှိပွီး ဝနျထမျးတှအေတှကျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတှေ၊ ခှငျ့ရကျတှအေပွငျ ပညာသငျဆုတှပေါ အပွညျ့အဝခံစားစတေဲ့အတှကျ ပြျောရှငျနကွေပါတယျ။
၄။ ခြီလီ (Chile)
ခြီလီနိုငျငံရဲ့အခွခေံလုပျခလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၃၇၁ (၅ဝ၇,ဝဝဝကပျြ)သာ ရှိပမေယျ့လညျး ဝနျထမျး ၇၇ရာခိုငျနှုနျးက လုပျငနျးခှငျမှာ ကနြေပျနကွေပါတယျ။ ဘရာဇီးနိုငျငံနဲ့ရာခိုငျနှုနျးခွငျး တူပမေယျ့လညျး ခြီလီနိုငျငံက အခွခေံလစာပိုမြားတဲ့အတှကျ နံပါတျစဉျအရ ပိုမွငျ့နရေတာဖွဈပါတယျ။ တဈနှဈမှာ အမြားပွညျသူရုံးပိတျရကျ ၁၆ရကျရှိတဲ့အပွငျ မီးဖှားခှငျ့ ၁၈ပတျ (၄လခှဲ) အထိတောငျ လစာနဲ့ခှငျ့ယူလို့ရပါတယျ။
၃။ အမရေိကနျ (USA)
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ တဈနာရီလုပျခဟာ ၇.၂၅ ဒျေါလာ (၉,၉ဝဝကပျြ) အထိရှိရုံမက ဝနျထမျး ၇၇ရာခိုငျနှုနျးက လုပျငနျးခှငျမှာ ကနြေပျနကွေပါတယျ။ အပျေါကနိုငျငံတှနေဲ့ ရာခိုငျနှုနျးခွငျးတူပမေယျ့လညျး လစာမြားလှနျးတဲ့အတှကျ နံပါတျ (၃) ခြိတျနတောဖွဈပါတယျ။ အမြားပွညျသူရုံးပိတျရကျ ၁ဝရကျရှိပွီး လူနမှေုအဆငျ့အတနျးမွငျ့မားတာတှရေယျ၊ အလုပျသမားအခှငျ့အရေး အပွညျ့အဝရရှိတာတှကွေောငျ့ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျခငျြသူမြားပွားနတော ဖွဈပါတယျ။
၂။ မက်ကဆီကို (Mexico)
မက်ကဆီကိုနိုငျငံရဲ့ တဈနာရီလုပျခဟာ ၃.၉ ဒျေါလာ (၅,၃ဝဝကပျြ) ဖွဈလို့ တခွားနိုငျငံတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျမယျဆိုရငျ အခွခေံလုပျအားခ အနညျးငယျနညျးပါးတယျလို့ သတျမှတျနိုငျသလို အမြားပွညျသူရုံးပိတျရကျလညျး ၁ဝရကျသာ ရှိပါတယျ။ Edenred-Ipsos Barometer အဖှဲ့ဟာ မက်ကဆီကိုနိုငျငံမှ ဝနျထမျးတှကေို စဈတမျးကောကျယူတဲ့အခါမှာ ၈၁ရာခိုငျနှုနျးဟာ လကျရှိလုပျငနျးခှငျကို ကနြေပျကွပါလို့သိရပါတယျ။ မက်ကဆီကိုနိုငျငံမှာ ဝနျထမျးတဈယောကျဟာ တဈနှဈအလုပျလုပျပွီးတာနဲ့ အပနျးဖွခေရီးထှကျဖို့ လစာနဲ့ ခရီးခွောကျရကျ ထှကျခှငျ့ပွုပါသေးတယျ။
၁။ အိန်ဒိယ (India)
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၆၉ (၃၆၇,ဝဝဝကပျြ) ဖွဈလို့ နိုငျငံတကာနဲ့နှိုငျးယှဉျရငျ နညျးတယျလို့ ယူဆရပမေယျ့ အိန်ဒိယဝနျထမျး ၈၈ရာခိုငျနှုနျးဟာ လကျရှိလုပျငနျးခှငျမှာ ကနြေပျလို့နပေါတယျ။ အမြားပွညျသူရုံးပိတျရကျ ၁၇ရကျရှိပွီး လုပျသကျခှငျ့ရကျ (Annual Leave) ၂၁ရကျထိတောငျရတဲ့အပွငျ လုပျငနျးခှငျမှာ အန်တရာယျဖွဈလာရငျလညျး ဒျေါလာ၁သိနျးအထိတောငျ လြျောကွေးရပါသေးတယျ။
ဝနျထမျးတှအေပြျောရှငျဆုံးနိုငျငံကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံဖွဈသလို စိတျအညဈဆုံး၊ ဖိအားအမြားဆုံးနိုငျငံကတော့ ဂပြနျနိုငျငံဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့လညျး အခွခေံလုပျအားခ ၃၆ဝဝကပျြမှ တိုးမွှငျ့ပေးဖို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ ကဲ . . . စာဖတျသူတှလေညျး လုပျငနျးခှငျမှာ ပြျောရဲ့လား၊ ရငျဖှငျ့ရအောငျဗြာ။။